Rudd - inhlanzi, ngoba izici eziningi zangaphandle njengomuntu roach. Futhi ngakho abadobi abaningi ongenalwazi ukudida lezi zinhlobo ezimbili. Uma ngikhuluma iqiniso, esihlukile Rudd roach kulula. Nanguya enhle futhi licace. It has a ezahlukene isakhiwo pharyngeal amazinyo, futhi uhluke roach umlomo etshekile, okuyilona elisebenzayo futhi ezikhomba up. Ngesisu it has yokhalo abavelele. Ezindebeni eyinqaba kuphela usebe wakhe ophuzi. Izikali amancane segolide. Fin amaphiko kungaqali phezu typhoid, njengomuntu roach, futhi kancane ngemva kwakhe. Kulokhu, Rudd ebanzi ngisho kancane mkhulu. Ngokusho isakhiwo umzimba wabo kuyafana xaxa bream.
Njengoba singabona kusukela incazelo, Rudd - ubukeka izinhlanzi ezikhangayo. Anglers abaningi bakubheka njengodumo noma ingenye kwezinhlobo amahle kakhulu ayehlala imifula yethu kanye namachibi. Ikakhulukazi umxhwele nesambatho sazo lomshado. Ngo izinhlanzi ezinkulu ke kuxhopha: esiswini segolide, amaphiko ebomvu. abantu abasha yibo silvery ngaphezulu ewonke alula kakhulu futhi ezinamaphiko nezingcwecwe ayilutho. Kakhulu akuvamile, ingwegwe Ubamba ezihlukahlukene ekhethekile kwalesi silwane. Rudd - izinhlanzi kuxhopha, kodwa zenyathi yayo, eyaziwa nangokuthi i-Wren noma princeling has ngokuphelele langa ngokubomvu izikali. Kuyinto umxhwele kakhulu ngemibala yayo. Kodwa kuhle ukuthi uzinake wena ukuthi redeye yethu namanje kunabayeni ubuhle zenyathi western European.
Lokhu advantageously igcina ifomu e amatheku nasemachibini staritsah ukugeleza. Uyabathanda Rudd kanye amachibi, yene nemihlanga odlula. Kuyinto kulezi zindawo butholakala umphakathi roach, carp crucian, bream ezimhlophe, bream futhi kuholela okuthulile, ukuphila umzimba. It akuvamile asuka endaweni ehlala njalo kwendawo yazo futhi akwenzi Ukuthuthwa abalulekile. Ukuhlangabezana on ichibi kungenzeka kuphela ezindaweni ezithile, ngokuvamile kungcono coast ongaphakeme, yene ngokuphelele imihlanga.
Rudd - izinhlanzi esiphundu, ngakho-ke ubanjwe yonke indawo. Ngokuvamile akubhekile kanye umhlanga noma umhlanga, badoba amafasitela ukusula phakathi aluhlaza izimila yasemanzini. Bait akumele ibe liphansi kakhulu, ngakho-ke ibekwe 40 cm kusukela iflothi. Ngemva nokujikijela ngamunye, uma asilandelwanga ngomzuzu lokuqala yizinyoka, iflothi kancane ukuheha. Lokhu kuvumela uhlelo lesikafula ukuba iqine, okwenza ngenela kuyinto ebucayi kakhulu. Ngakho ngisho Twitch okuncane iflothi kuyoba obonakalayo. Isikhathi esining impela, bite kufanele ibe yazi ngesikathi lolo olubi phansi. Futhi kwenzeka ukuthi redeye ngokushesha ngokwanele ngixhumane ukuba izimpethu ezikhangayo nezibungu, ngokushesha nje lapho uthinta kwamanzi.
Akukhona nje ngaphandle nibonakala kubantu nilungile afana Rudd roach. "Yini ukubamba le nhlanzi?" - umbuzo Kulula kakhulu futhi elula. Thanda roaches, ukhetha worm, izibungu, inhlama, isinkwa, ibhali. Kodwa kukhona umehluko okukhulu ukuziphatha kwalezi zinhlobo ezimbili. Ngokungafani roach Rudd hhayi ukudansela isiginci sakhe abethelwe lolo hook, nangekutetsemba ukudansela isiginci sakhe iflothi noma phansi noma eceleni. Hook ke uqaphe kakhulu, le nhlanzi has a intukuthelo abukhali futhi ngeke amelane kuze kube sekupheleni. Ngakho-ke podsachek ngeke engadingekile ekudobeni yayo.
Ekuphetheni singasho ukuthi kukhona mnandi futhi ukugembula ngokwalo izinhlobo ukudoba kunezinhlanzi Rudd, isithombe ne Trophies wabanjwa lokhu ubuhle kumele kuhlobisa albhamu impumelelo yimuphi Angler abanolwazi.
Kuphumelele ukudoba eyikati ku Kwok futhi bengena ezingosini zayo
Perch Blesnenie. Baubles ku walleye nokudoba imishini
Catching carp phezu donk ukusuka ogwini: izindlela, ngenela, lolo, izimfihlo
I-carp enkulu futhi sokudoba Element
I sha Kia Opirus
Thermostat ngoba underfloor: uxhumano kanye nezici
Lake Alakol. Kazakhstan, Alakol echibini - ezokungcebeleka
I-smartphone "Land Rover A8": imiyalo, izici, izibuyekezo
Umuthi 'Allokin-alpha'. Ukusetshenziswa Guide nomuthi
Keychains sobuhlalo - akusiwona nje umhlobiso sokuqala ocingweni noma okhiye, kodwa isipho emnandi.
Yimaphi amaholide ngoMeyi eFinland? 1, 9, 14 Meyi lokho ngamaholide e Finland?
Mini-ukugeza "Karcher" ngoba imishini yokuwasha: ukubuyekeza nezincomo yokukhethwa
Kubiza malini ukubhalisa kumshuwalense womshayeli ngaphandle kokuthola ulwazi. Kubiza malini ukubhalisa umuntu womshuwalense?
Indawo yezomnotho-indawo (EGP) yaseSweden kanye nezici zayo